ဒူးဆစ်ရောင်ရမ်းနာရောဂါ၏ကုထုံးများ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
နိုဝင်ဘာ 13, 2017 Professor Prakit Tienboon, M.D.
ဒူးခေါင်းအစားထိုးခွဲစိတ်ကုသနည်းတွင် အခြေခံအားဖြင့် နှစ်မျိုးရှိသည်။
လုံးဝပြည့်စုံသောဒူးခေါင်းအစားထိုးခွဲစိတ်ခြင်း (TKA) နှင့် ကဏ္ဍတစ်ခုနှှု့်သာဆိုင်သော ဒူးခေါင်းအစားထိုးခွဲစိတ်ခြင်း (သို ့) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်သော ဒူးခေါင်း အစားထိုးခြင်းတို ့ဖြစ်သည်။
ဒူးခေါင်းရောင်ရမ်းခြင်းရောဂါသည် သဘာဝတရား၏ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်သော အသက်အရွယ် အပေါ်မူတည်၍ (သို ့) အလွန်အားစိုက်ထုတ်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်သည်။ သို ့သော်လည်း များသောအားဖြင့် ယခင်ကတည်ရှိခဲ့သော အခြေအနေများနှင့် ဆက်စပ်၍ ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာမည်ဆိုလျှင် အကျိုးဆက်ဖြစ်သော ဖွဲ ့စည်းမှပြိုကွဲခြင်းများကို ရပ်တန် ့နိုင်ရန် ခက်ခဲသွားမည်။ ယခုလက်ရှိဆေးပညာနှင့် ဆိုင်သောအသိပညာအရ၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဤကဲ့သို ့ဖြစ်လာခြင်း ကိုနှေးသွားအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒါမှဖွဲ ့စည်းမှုပျက်စီးလာမှုသည် မြန်ဆန်၍ဖြစ်မလာတော့ပေ။
ဤအရာများအတွက် မည်ကဲ့့သို ့သော ကုသမှုနည်းလမ်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ဆိုတာကို သိထားရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍သင်ဟာ ဒူးဆစ််ရောင်ရမ်းနာဝေဒနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရမည်ဆိုလျှင် ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးကာာ ကုသမှုအတွက် အစီအစဉ်ကို ကြိုတင်၍ချထားသင့်သည်။ အထူးသဖြင့်ဒူးဆစ် ရောင်ရမ်းနာရောဂါအစဦးပိုင်းကထဲက ပြုလုပ်သင့်သည်။ ဒူးဆစ်ရောင်ရမ်းနာခြင်းကို ကုသရာတွင် ကုထုံးများစွာရှိသလို အရေးတကြီးခွဲစိတ် ရန်မလိုအပ်ပေ။ ဖွဲ ့စည်းမှုပျက်စီးခြင်းအရမ်းမပြင်းထန်လျှင်လည်း ခွဲစိတ်ရန်မလိုအပ်သေးပေ။ခွဲစိတ်ခြင်းဟာဆိုလျှင် ဒူးဆစ်အင်မတန်နာကျင်သောအခါ၌သော်လည်းကောင်း ဒူးဆစ်တုံ ့ပြန်မှုကြန် ့့ကြာသောအချိန် (သို ့မဟုတ်) ရောဂါဝေဒနာခံစားရသူသည် လမ်းလျှောက်ရန်အတွက်အခက်အခဲရှိနေချိန်များ၌သာ ခွဲစိတ်ရန်လိုပေမည်။ ဤကဲ့သို ့အခြေအနေများထဲမှာ ခွဲစိတ်ကုသရန်နည်းလမ်းများမှာ အများကြီးရှိနိုင်သည်။ ဥပမာ ပြင်းထန်သောခြေသလုံးရိုးခွဲစိတ်ခြင်း ၊ လုံးဝပြည့်စုံသောဒူးခေါင်းအစားထိုးခြင်း (သို ့မဟုတ်) ဖွဲ့စည်းမှုပြိုကွဲခြင်းသည် တော်ရုံသင့်ရုံပဲဆိုလျှင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်သော ဒူးခေါင်းအစားထိုး များစသည်တို ဖြစ်သည်။
ဒူးခေါင်းအစားထိုးခွဲစိတ်ကုသခြင်းတွင် အခြေခံအားဖြင့် အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ လုံးဝပြည့်စုံသော ဒူးခေါင်းအစားထိုးခွဲစိတ်ကုသခြင်း (TKA) နှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်သော ဒူးခေါင်းအစားထိုးခွဲစိတ် ခြင်းဟူ၍နှစ်မျိုးရှိသည်။
ကဏ္ဍတစ်ခုနှင့် သာဆိုင်သော ဒူးခေါင်းအစားထိုးခွဲစိတ်ကုသခြင်းဆိုသည်မှာ အခြားအခြေအနေကောင်းသော အရိုးများနှင့် အရွတ်များသန်စွမ်းသော အချိန်၌ဒူးခေါင်းအတွင်းရှိ ပျက်စီးနေသော ကဏ္ဍတစ်ခုကိုသာဖယ်ရှား ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဒူးဆစ်ရောင်ရမ်းနာရောဂါသည အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်၍ ထိုသူ၏ဒူးခေါင်းတစ်ခု၏ အဆက်ဖြစ်သော နေရာတွင်သားဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို ့ဖြစ်လျှင်လုံးဝပြည့်စုံ သောဒူးခေါင်းအစားထိုးခွဲစိတ်ခြင်းထက် ကဏ္ဍတစ်ခုနှင့် သာဆိုင်သော ဒူးခေါင်းအစားထိုးခွဲစိတ်ကုသခြင်းသည် ပို၍သင့်လျှော်သည်။ ဥပမာပေးရလျှင် ပေါင်ရိုး၊ ခြေသလုံးရိုးတို ့၌ရှိသော အရိုးများ၊ အရွတ်များကိုဖယ်ရှားခြင်း ဖြစ်သည်။ လုံးဝပြည့်စုံသောဒူးခေါင်းအစားထိုးခွဲစိတ်ခြင်းသည် အဓိကကျသော ခခွဲစိတ်ကုသခြင်းဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် ခွဲစိတ်ကုသမှုပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လာသော နာကျင်မှု၊ သွေးဆုံးရှုံးခြင်းဇီဝကလာပ်စီးအစု ပျက်စီးခြင်း၊ ကြာရှည်စွာပြန်လည်ကျန်းမာရန် အချိန်ယူရခြင်း စသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ထို ့အပြင် ဒူးခေါင်းကို ကွေးရာဆန် ့ရာတွင် ရှိသင့်သည် ့အနေအထားမျိုးတွင်ရှိမနေလျှင်၊ ကဏ္ဍတစ်ခုနှင့်သာဆိုင်သော ဒူးခေါင်းအစားထိုးခွဲစိတ်ခြင်းကို မရွေးချယ်ခြင်းသည် ပို၍ကောင်းသည်။
ဤနည်းလမ်းသည်ဒူးခေါင်းရောင်ရမ်းနာရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကို သက်သာစေရာတွင် ထိရောက်သည်။ မူလအခြေအနေတွင်ရှိသော အရွတ်များ၊ အခြားကဏ္ဍများနှင့် အဆစ်များ အတွင်းရှိများပြားသောအကြောမျှင်များ သန်စွမ်းသောအချိန်၌ ဒူးအဆစ်အတွင်းဘက်တွင်နာကျင်ခံစားရမှုများ ကိုသက်သာစေသည်။ အကျိုးရလဒ်အနေဖြင့်ဤနည်းလမ်းသည် အဓိကျသည်ဟု ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်တွင် အနည်းငယ်သာ နာကျင်ခြင်းနှင့် သွေးဆုံးရှုံးခြင်း၊ အကြောမျှင်နှင့်ကြွက်သားကလာပ်စ် စီးအစုများကို ဖြတ်တောက်ရန်မလိုခြင်း၊ မြန်ဆန်စွာ ဒူးခေါင်းပြန်လည် ကောင်းမွန်လာခြင်း၊ ဆေးရုံတွင်တက်ရောက်ကုသချိန်တိုတောင်းခြင်းနှင့် မိမိ၏နေ ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်ငန်းများသို့လျင်မြန်စွာပြန်၍လုပ်ကိုင်နိုင်စေခြင်းစသည့်အခြေအနေများပေါ်မူတည်ပြီးကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
အောင်မြင်သောUKA နည်းလမ်းသည်လူနာ၏ဒူးခေါင်းကို အကောင်းပကတိအတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ရန်ခွင့် ပေးသည်။ လူနာသည်လည်းဒူးခေါင်းကို ပုံမှန်အတိုင်းကွေးနိုင်ဆန် ့နိုင်သလို၊ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ရိုးရိုးထိုင်ခြင်း၊ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ခြင်း၊ ဒူးထောက််ခြင်းများကို သဘာဝ၏အရသာကို ခံစားရင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို ့ပေမဲ့ ဤကဲ ့သို ့ခွဲစိတ်ကုသခြင်းသည် ပြေးလိုသောသူ (သို ့)အားကစားကို ပြင်းထန်စွာပြုလုပ်ချင်သူများအတွက် မသင့်လျော်ပေ။ ဤကဲ့သို ့ပြုလုပ်မည်ဆိုလျှင် လိုချင်သောအတိုင်းအတာထက် ဒူးခေါင်း၏ခံနိုင်စွမ်းသည် မကြာ မှီပင် ကုန်ဆုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းဖြင့်သင့်လျော်သောလူနာကို ရွေးချယ်ပြီး အရိုးကုသမှုတွင် ကျွမ်းကျင်သောသူများကို အသုံးပြုမည်ဆိုလျှင်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သာအစားထိုးခြင်းသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၀ နှစ် နှင့် နှစ် ၂၀ကြားတွင်တည်တန် ့ခဲ့ပြီး လုံံးဝပြည့်စုံ သောဒူးခေါင်းအစားထိုးခွဲစိတ်ခြင်းထက်ပို ၍လွယ်ကူသောခွဲစိတ်ကုသမှုအဖြစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။
မည်သူသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်သောဒူးခေါင်းအစားထိုးခွဲစိတ်ကုသခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
ဤကုသခြင်းကို ပြုလုပ်ရန်ကမ်းလှမ်းလာမည်ဆိုလျှင် ထိုသူကို ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ရမည်။ အဓိကအရေးကြီးဆုံးသည် UKA နှင့်သင့်လျှော်သူဖြစ်ဖို ့ဆိုလျှင်ဒူးဆစ်ဖွဲ ့စည်းမှုပျက်စီးခြင်းသည် အတွင်းဘက်တွင်သာရှိရပြီး၊ ခြေထောက်သည်လည်း အရမ်းကွေးမနေဘဲ၊ သူ၏အခြေအနေသည် စိုးရိမ်ရသော အဆင့်တွင်ရှိမနေသင့်ပေ။ ဤအရာများကို စဉ်းစားကြည့်မည်ဆိုလျှင် မည်သည့်အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားမ ဆို UKA ကိုကြုံရနိုင်သည်။ လူနာ၏လက်ရှိအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးပြင်းထန်စွာအသုံးပြုထားမှုပေါ်မူတည် သည်။ အသက် ၅၀ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူများအတွက် ဥပမာ အဆစ်ဖွဲ ့စည်းမှု အနည်းငယ်ပြိုကွဲသူ နှင့် ဒူးခေါင်း ကို အနည်းငယ်သာ အသုံးချသူများအတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်သော ဒူးခေါင်းအစားထိုးခြင်းကိုသာ ကောင်းမွန်ကြောင်း၊ သင့်လျော်ကြောင်းထောက်ခံချက်ပေးလိုပါသည်။ ဤကဲ့သို ့အစားထိုးကုသခြင်းသည် ၁၀ နှစ်မှ နှစ်၂၀ အထိကြာရှည်ခံပါသည်။ အချိန်ကြာလာပြီး အကယ်၍ဖွဲ ့စည်းမှုပြိုကွဲခြင်းပြန်လာ၍ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် ထိုအခါခွဲစိတ်မှုကို အနောက်တဖန်ပြုလုပ်နိုင်သလို (သို ့)လုံးဝပြည့်စုံသော ဒူးခေါင်းအစားထိုးခွဲခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသောဒူးခေါင်းအစားထိုးခြင်းသည် အသက် ၆၅ နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူများအတွက် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်သည်။
ဒူးဆစ်ကိုပြင်းထန်စွာထိခိုက်ထားသောလူငယ်များဥပမာ အားကစားပြုလုပ်သူများအတွက် အဆစ်များကို နာကျင်ခြင်းသက်သာစေသောခွဲစိတ်ကုသခြင်းသည် သင့်လျှော်ကြောင်းထောက်ခံချက်ပေးခဲ့သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ထိခိုက်ထားသောဒူးခေါင်းနှင့်အကောင်းပကတိရှိသောဘက်တို ့၏ဖြောင့်တန်းမှုကိုညှိပေး သည်။ပြီးလျှင်အဆစ်ကိုလည်းအလေးချိန်ကိုထိန်းညှိရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်လုပ်ဆောင်ပေးပြီး နဂိုရှိခဲ့့သော အဆစ်အခြေအနေများထက်ပို ၍ကောင်းသောရလဒ်များထွက်ပေါ်လာစေသည်။
၁. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒူးခေါင်းအစားထိုးခွဲစိတ်ကုသခြင်းသည် လုံးဝပြည့်စုံသောဒူးခေါင်းအစားထိုးကုသခြင်း ထက်ပို၍ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်ဖြစ်သောကြောင့် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့်သာကုသသင့်သည်။
၂. များပြားသောကျယ်ပြန် ့သောကုသမှုဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများသည် ခွဲစိတ်ရာတွင် အသုံးပြုရပြီး ထိုအရာ များသည်ဒူးခေါင်းကဏ္ဍဆိုင်ရာဖယ်ရှားခြင်းနှင့် အစားထိုးခြင်းမများကိုလုပ်ကိုင်စေသည်။
၃. ဤနည်းလမ်းသည် ဖွဲ ့စည်းမှုခဏခဏ ပြိုကွဲသောလူနာများ (သို ့) ဒူးအဆစ်များအင်မတန် ကွေးသောလူနာများအတွက် မသင့်လျှော်ပေ။ ပြင်းထန်သော အရိုးပွရောဂါသည် အဆစ်ရောင်ရောဂါဝေဒနာ သည်များ (သို ့)အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာပြီး ဗီတာမင်ဒီလျော့နည်း၍အရိုးပျော့သော အခြေအနေတွင်ရှိသော လူနာျားအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
သင့်လျော်သောအသက်အရွယ်၌ရှိသောလူနာများစိတ်ထဲတွင်မှတ်သားရမည်မှာ ၄င်းတို ့ပြင်းထန်စွာထိခိုက် ခဲ့သောနေရာများ၏အရိုးကုသမှု၌ကျွမ်းကျင်သောသူများအားလုံးသည် အကျိုးထိရောက်စွာစွမ်းဆောင်နိုင်သည့် ကုသမှုရလဒ်များကို ရရှိထားသည်။ သို ့ရာတွင်အစားထိုးခဲ့သောဒူးခေါင်းများသည် မူလဒူးခေါင်းများနည်းတူ ကောင်းနိုင်ပါသလား။ အစားထိုးကုသမှုများသည်ခိုင်မာသော်လည်းဒူးကိုပို၍အသုံးပြုခြင်း (သို ့) မှားယွင်းစွာ အသုံးပြုမိလျှင်ပြန်၍ပျက်စီးသွားနိုင်သည်။ ကျွနု်ပ်တို ့၏အရိုးများသည် သန်လည်းသန်မာသလိုပျော့လည်းပျော့ ပြောင်းပြီး သူတို ့ကိုယ်တိုင်ပြန်၍ပြုပြင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထိုပျော့ပြောင်းခြင်းသည် ဆက်တိုက်အသုံးပြု၍ပျက်စီး ခြင်းကို လျော့ကျစေသည်။ အင်ဂျင်စက်ဆီထည့်၍ချောဆီထိုးခြင်းနှင့် တူသည်။ ကျွနု်ပ်တို ့ကိုယ်ခန္ဓာသည် အရွတ်ဆဲလ်အသစ်များကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သေချာစွာထိန်းသိမ်းထားမည်ဆိုလျှင် ကျွနု်ပ်တို ့၏အရိုးအဆစ် များသည်ပိုလျှံသော အလေးချိန်ကို ထောက်ပံ့ထားစရာမလိုတော့ပါ။ ပြီးလျှင်လည်းအဆစ်များကိုမှန်ကန်သော နည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုပြီး လေ့ကျင့်ခန်းများကိုလည်းလုံလုံလောက်လောက်လုပ်သင့်သည်။ ဤအချက်များကို လိုက်နာခြင်းအားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို ့၏အဆစ်များသည်ကျန်းကျန်းမာမာဖြင့်ကြာရှည်စွာ ရှိနေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။